ChiGerman, shamwari dzinogara muCologne, Germany ndokumbirawo ubatsire ... - GERMAN
Ndapota tibatsira shamwari dzako dzinogara muCologne ...
« : Kurume 10, 2016 pa03: 30: 05 pm »
Re: Shamwari dzinogara muCologne ndapota ndibatsire ...
« Reply #1: Kurume 10, 2016 pa03: 40: 53 pm »
Wakambofunga kuenda kucourse saka saka
« Reply #2: Kurume 10, 2016 pa04: 07: 24 pm »
Kwete, hama, ndichaenda kukosi, asi kune zvinhu zvidiki zvakaita seizvi, ngatitarisei pamberi kana mushure menguva yekosi saiye.
« Reply #3: Kurume 10, 2016 pa04: 23: 00 pm »
Iwe unoti minijop, haufunge nezve basa izvozvi, enda unogadzikana, bata imba yako, utenge, ndipo pauchatanga kosi, ita shuwa kuti iwe unoita kosi, ipapo ichaonekwa pamberi pako zvakadaro.
Yakatorwa kubva: kncinar - Kurume 10, 2016 pa 04:07:24 pm
« Reply #4: Kurume 12, 2016, 02:04:10 am »
Mhoro, kutanga kwezvose, handinzwisise kuti sei uchida kushanda, kana mumwe wako asina mari yakakwana, unogona kuwana rubatsiro kubva kuhurumende, saka haufanire kushanda zvakanaka hachisi chinhu chakaipa shanda, zvirinani kuti uwane yako mari pane kuwana rubatsiro, asi kushanda kuchakanganisa kudzidza kwako kwechiGerman uye unofanirwa kubata nebasa rinozotora nguva yako kudzidza chiGerman. Pedzisa kudzidza chiGerman, ipapo iwe uchazoshanda munzira yangu, paive nevanhu vatatu vaishanda mukosi ini yandakapinda, vaive padanho rakaipisisa kana kosi yacho yapera.Kudzidza kuri kukanganisa zvikuru zviri nyore kwauri kuti utarise pachinhu chimwe chete uye uzviite.
Nenzira, ndiri kugara muvaranda zvakare.
« Reply #5: Kubvumbi 04, 2016 pa 12:02:12 am »
Changamire, ndinogarawo kuCologne. Usafunge nezvekushanda nekukurumidza kana uchinge wasvika, iwe unenge uine akawanda mapepa ebasa, ivo vachadaidza amt, vachataura, vachati enda kune imwe-on-one kosi newe. Zvinotora mwedzi inokwana mitanhatu kuti ujairire, uye zvingave zvakakodzera kana ndikati anga ava makore maviri kubvira pandakauya uye ndisina kunyatsoziva. Enda kukosi yemutauro pakutanga ndakapasa bvunzo yekutanga b6, kutaura chokwadi, imba yacho yainakidza ndisingataure, ndakaita 2 kubva ku1 schreiben kubva kune lesen, 44 kubva ku sprechen kwaiita kunge jee Dzivisa kushushikana, buda uye upinde nharaunda sezvazvinogona. Iwe wakumbira basa, ini ndataura zvimwe zvinhu zvakadaro Unogona kuwana basa muHal muCologne, kana iwe uchida kushanda neyakareruka kana imwe yemakambani evanoshanda ekuchenesa makambani.
« Reply #6: Mbudzi 27, 2017, 01:04:24 ndiri »
Yakatorwa kubva: kncinar - Kurume 10, 2016 pa 03:30:05 pm
Mhoroi, kana mhuri yeAlmancax ikaita rombo rakanaka mushure memazuva mashoma, ini ndichatanga kugara mumuranda kuGerman. Kana vhiza yapera, kunetsekana kwekutsvaga basa kwatanga.
Chekutanga pane zvese, Mwari vakubatsire, isu takapinda munzira, asi ngatione kuti mhedzisiro yacho ichave yei.
Enda Unomudzidzisa Hupenyu hweGungwa Haisi Tsitsi Kana Zvikepe Zvanyura.